आज हरिबोधिनी एकादशी : किन गरिन्छ तुलसी विवाह ? - ramechhapkhabar.com
आज हरिबोधिनी एकादशी : किन गरिन्छ तुलसी विवाह ?
आज हरिबोधिनी एकादशी । कार्तिक शुक्ल एकादशी ठूली एकादशी वा तुलसी विवाहको नामले प्रसिद्ध छ । यस दिन विशेषगरी विष्णु भगवानको पूजा आरधनासहित तुलसी विवाहको उत्सव मनाइन्छ । आजको दिन नै हरिशयनी एकादशीबाट चिरनिद्रामा सुतेका विष्णु भगवान् उठ्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।
सनातन धर्मअनुसार आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि चार महिना सुतेर भगवान् विष्णुले सबैभन्दा पहिले तुलसीको प्रार्थना सुनेका र त्यसै प्रार्थनाका प्रभावले निद्राबाट उठेका थिए । यसै दिन तुलसीको विवाह विष्णु भगवानसँग भएको धार्मिक विश्वास छ ।
दशँै, तिहार, छठलगायत पर्वहरूका रोमाञ्चक अनि उल्लासमय क्षणहरू समापनसँगै ठूला पर्वहरू पनि सकिँदै छन् । त्यसैले हरिबोधिनी एकादशीलाई यस वर्षको चाडपर्वहरूको खाता बन्द भएको विगुलका रूपमा लिने गरिन्छ । कोजाग्रत पूर्णिमाबाट बाल्न थालिएको आकाशे बत्तीलाई आजबाट बाल्न बन्द गरिने चलन पनि छ ।
वर्षभरिका २४ वटा एकादशीमध्ये हरिबोधिनी एकादशी एउटा महत्वपूर्ण एकादशी हो । यसको महिमाका कारणले पनि यस एकादशीलाई सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ठूली एकादशी पनि भन्ने गरिएको हो ।
आदिकालदेखि पूजाको परम्परा बसेको तुलसीको महिमा वैज्ञानिकरूपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ । पद्म पुराणमा बिन्दादेवीले पृथ्वीमा आएर भगवान् विष्णुलाई आफ्नो पतिका रूपमा पाउन गरेको तपस्यासँग तुलसीको महत्व जोडिएको छ । यस्तै श्रीमद भागवतको ३ को ५ को १९औँ खण्डमा तुलसी बिरुवाको दैविक गुणलाई व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
हजारौँ वर्षदेखि सनातन संस्कारीहरू प्रातकालमै उठेर तुलसीमा पानी चढाएर अनि नमन गरेर मात्र आ–आफ्नो दैनिकीमा लाग्ने गर्छन् । जन्म, मृत्युदेखि हरेक सनातन संस्कारमा तुलसीको बिरुवा अनि पातको महत्व हुन्छ । तुलसी पात हालेर अनि भगवानलाई अर्पण गरेर मात्र भोजन सेवन गर्ने चलन अझै पनि कैयनमा विद्यमान छ ।
आँगनछेउको तुलसीको मठ विवाह ब्रतबन्धलगायत मृत्युशय्यासम्मका लागि पवित्र स्थान मानेर उपयोग गरिने चलन छ । त्यसैले तुलसीको मठ हुने घरलाई तीर्थ समान मानिन्छ । तुलसीको सुगन्धले दश दिशा पवित्र हुन्छ भनिन्छ । तुलसीको पूजा गरिएको घरमा यमदूत पनि पस्दैनन् भन्ने आस्थाका कारण हिन्दु धर्मावलम्बीले घरमा तुलसीको मठ बनाउँछन् ।
तुलसीको पात, डाँठ, वा फूलको रस रुघाखोकी र औलोलगायत रोगका लागि औषधि हुन्छ । यो रस शरीरमा लगाएर सुतेमा लामखुट्टेले टोक्दैन । तुलसीको मठ भएको स्थलवरपर विषालु सर्प पनि आउँदैनन् ।
मठको वरपर वहने हावाले विषालु कीटाणुलाई नष्ट गर्दछ । मलेरिया रोग उत्पन्न गर्ने वायुलाई नष्ट गर्न सक्ने शक्ति तुलसीमा भएको आधुनिक विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको छ ।
शरद ऋतुभर सबै प्राणीका लागि तुलसीलाई महाऔषधि मानिन्छ । कार्तिक महिनामा तुलसीको माला लगाउँदा र एक लाख तुलसी पत्र विष्णुलाई अर्पण गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । धार्मिक र सांस्कृतिक अनि वैज्ञानिकरूपमा पनि अति उपयोगी एक मात्र वनस्पतिको रूपमा तुलसीलाई लिइन्छ ।
औपचारिक रूपमा हरिशयनी एकादशीमा रोपिएको तुलसीको बिरुवा हरिबोधिनी एकादशीसम्ममा धेरै ठूलो भइसकेको हुन्छ । सोही तुलसीको बिरुवाको गमलालाई एकादशीको साँझ गेरु आदिबाट सजाउनु पर्छ । त्यसपछि गमलाको चारैतिर मण्डप बनाएर त्यसमाथि दुलहीले लगाउने घुम्टी आकारको वस्त्र ओढाउनु पर्छ । गमलालाई सारीमा बेरेर तुलसीलाई चुरा लगाइदिएर श्रृंगार समेत गरिदिनु पर्छ ।
त्यसपछि भगवान् गणेश आदि देवताहरूको तथा शालिग्रामको विधिवत रूपमा पूजा गरेर तुलसीलाई षोडशोपचार पूजा ‘तुलस्यै नमः’ मन्त्रमार्फत गर्नु पर्दछ । त्यसपछि एउटा नरिवल, दक्षिणाका साथ टीकाको रूपमा राख्नु पर्छ र भगवान् शालिग्रामको मूर्तिको सिंहासन हातमा लिएर तुलसीको मठलाई सात पटक परिक्रमा गराउनु पर्छ । आरतीपश्चात् विवाहोत्सव पूर्ण हुन्छ ।
तुलसी विवाहमा हिन्दु विवाहजस्तै गरी सबै कार्य सम्पन्न गरिन्छ । विवाहको समय मंगलगीत पनि गाइन्छ । श्रीहरि विष्णुलाई एक पत्र तुलसी समर्पित गर्नाले वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ । आजको दिन भक्तालुहरू विहानैदेखि नुहाइधुवाइ अनि चोखो भएर व्रत बस्ने अनि फलाहार तथा कन्दमुल चोखोनितो खानेकुरा लिने चलन छ ।
विष्णु भगवानलाई नारायणका नामले पनि पुजिन्छ । तिनै नारायण र काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा परम्परागत र परापूर्वकालीन सम्बन्ध छ । परापूर्वकालमा काठमाडौँ सहरमाथि भगवान् विष्णुको अनुकम्पा रहिरहोस् भनी उपत्यकाको चारैतर्फको कुनामा विष्णुको प्रतिमा राखिएको हो । जसको प्रतापका कारण विष्णुको अनुग्रह काठमाडौँ सहरमा हरेक पिँढी दरपिँढी कायम रहने सामाजिक मान्यता रहेको पाइन्छ ।
काठमाडौँको पश्चिममा इचंगुनारायण, पूर्वमा चाँगुनारायण, उत्तरमा विशंखुनारायण अनि दक्षिणमा शेषनारायणका रूपमा विष्णुले काठमाडौंलाई हेरिरहेको जनविश्वास छ । शेषको अर्थ अन्त्य भन्ने हुन्छ र नारायण दर्शनको समापन बिन्दु पनि त्यहीँ हुनेगरेको भनाइ छ ।
यसरी चारवटै नारायणको दर्शनार्थ पुग्नसक्ने भक्तालुहरूका लागि पाटनको कृष्ण मन्दिरको छेउमा चारनारायण मन्दिरमा उपत्यकावरिपरिका चारै नारायणको प्रतिमा राखी सहज रूपमा दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसर्थ पनि ती नारायणहरूमा हरिबोधिनी एकादशीको दिन भक्तजनहरूको प्रशस्तै भिड देख्न सकिन्छ । यसबाहेक नेपालभर छरिएर रहेका भगवान् विष्णुका मन्दिर अनि तिर्थस्थलमा भक्तजनहरूको आज व्यापक भिड रहने गर्दछ ।